बालिका सामुहिक बलात्कारको शिकार « मेचीखबर
बालिका सामुहिक बलात्कारको शिकार
१४ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०९:१३ मेचीखबर
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा दुई बालिका सामुहिक बलात्कारको शिकार भएका छन् । उक्त घटनाहरु बैशाखको दोस्रो सातातिरै भएको भएपनि घटनाको प्रहरीले बुधवार मात्रै सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेपछि मात्रै घटनाबारे खुलाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार हाङ्देवाकी एक १४ वर्षीया बालिकालाई सामुहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा सोही गाविस वडा नं. ७ बस्ने नवीन सेञ्चुरी र वडा नं. २ बस्ने मैते घतानी पक्राउ परेका छन् ।
बाटो ढुकेर सामुहिक बलात्कार गरेको भनी बालिकाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा निजहरुलाई पक्राउ गरिएको र पक्राउ परेका विरुद्ध जबरजस्ती करणीअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान थालिएको ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
यस्तै एक १६ वर्षीया बालिकालाई सामुहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा निघुरादिन ६ बस्ने २४ वर्षीय मंगल तामाङसहित पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । उनीहरुले ति बालिकालाई बन्धक बनाई सामुहिक बलात्कार गरेको अभियोग लगाइएको छ । पक्राउ परेका पाँच जनालाई जबरजस्ती करणी तथा शरीर बन्धक अन्तर्गतको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय ताप्लेजुङमा जबरजस्ती करणीका घटना वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जबरजस्ती करणीका १५ वटा घटना भएका छन् । उक्त संख्यामध्ये ११ वटा जबरजस्ती करणी र चार वटा जबरजस्ती करणी उद्योग अन्तर्गतका मुद्दा छन् । जसमा चार जना बालिका बलात्कारका शिकार भएका घटना छन् ।
प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिकवर्षमा भएको जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योगका १५ वटा घटनामा संलग्न भनिएकामध्ये १७ जना पक्राउ परेका र तीन जना फरार छन् । फरार रहेकाहरुको पनि खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।